I-SONAKSHI SINHA'S SEXY HALF SAREE WARDROBE UKUSUKA KU-R .. URAJKUMAR- PAMPEREDPEOPLENY.COM - IFASHONI
Sonakshi Sinha's Sexy Half Saree Wardrobe Ukusuka kuR .. URajkumar
Iindaba Abaqeqeshi baseMelika bakhokelela kwizifundo zesiNgesi zabahlohli baseIndiya
Imidlalo I-IPL 2021: Ndisebenze ukubetha kwam emva kokungahoywa kwifandesi ka-2018, utshilo uHarshal Patel
Ekhaya Ifashoni Impahla yokunxiba ye-Bollywood I-Bollywood Wardrobe uJessica Ngu UJessica Peter | Nge-5 ka-Okthobha ka-2015
Saree Ke Fall Sa Kabhi Umdlalo Kiya Re, Kabhi Chhod Diya Dil, Kabhi Catch Kiya Re. Le mizila iqinisekile ukuzisa iinkumbulo zesanti emhlophe entlango yeGreat Rann yaseKutch, uncumo lukaSonakshi Sinha oluthandekayo kunye nesiqingatha sakhe esikhanyayo sesaree. Yivume, sonke sawela phezu kwezithende zikaShahid Kapoor ezibaxayo kunye nesinxibo esithandekayo sesibini esasijonga le ngoma yothando. Umboniso bhanyabhanya ka-2013 R ... URajkumar Libali eliqhelekileyo leqhawe, iqhawekazi kunye nomguvela kodwa sithanda kakhulu uChanda (isimilo sikaSonakshi) Saree Ke Ukuwela Sa.
Kutheni le nto sithanda isiqingatha sesare? Kuba banobukhazikhazi besarhe kunye nentuthuzelo yesiketi. Banokunxiba phezulu okanye ezantsi ukuze balungele umsitho kwaye banobuchwephesha obuphezulu. Ngubani olunge ngakumbi ukukhupha isiqingatha sesree saree ngaphandle kwe-B-town hottie uSonakshi Sinha? Unayo Nangona jonga kwinqanaba kwinombolo ye-racy Saree Ke Ukuwela Sa. kwaye siyayithanda.
I-Uff, i-neon ene-shade yesiqingatha seesari ngokuchasene nembala emhlophe, enamanzi amhlophe yirisip yokubonakalayo okumangalisayo. USonakshi Sinha ukwazile ukwenza ukuba wonke umntu anqwenele ubuncinci i-neon yesiqingatha se-neon, nokuba kupinki, luhlaza, tyheli okanye konke oku kungasentla.
Yonke isiqingatha sesree in Saree Ke Ukuwela Sa. Idityaniswe ne-choli e-sexy engenamqolo. Lo mntwana wase-Bollywood uqinisekile ukuba uyasifumana ukubila. Ukuhamba kwakhe ngokuhomba kunye nomzimba wakhe ongenasiphako kwenza ukuba iimpahla zibonakale zintle kwaye uyavuma, siqinisekile.
USonakshi Sinha wanikwa izixhobo ezifanelekileyo zokwenza yonke imisebenzi yesiqingatha seree saree. Eqaqambileyo, i-bangles zegolide, i-jhumka ezinzima, i-mang tikkas kunye nebhanti ye-saree zezona ziqwenga zeezacholo zihambelana neelokhwe zakhe njengoko wayedanisa kamnandi.
Ngaba uyayithanda imbonakalo kaSonakshi Sinha kule bhanyabhanya kunye nengoma? Sixelele kwibhokisi yezimvo engezantsi.
indlela yokusebenzisa iwayini ngobulungisa
uyisusa njani imibala ye-holi empahleni
iziqhamo zexesha lemvula kunye nemifuno e-india
ukusela amanzi emva kokutya kulungile okanye kubi
usigcina njani isisu sakho sipholile
ujjaini mahakali tempile kwi-18 shakti peethas